ဟာသသရုပ်ဆောင် သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သန်းထွဋ်အောင်(ခ) သားကြီးပါ သုံးဦးကို အရှေ့ပိုင်း ခ?? - Yangon Media Group
ဟာသသ ရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေးသေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် ရုံးချိန်းတွင် ကိုသန်းထွဋ်အောင်(ခ)သားကြီးပါ သုံးဦးကိုအရှေပိုင်းခရိုင် တရားရုံးတွင် တရားစွဲတင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့တွင် သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်တရားရုံး၌ သန်းထွဋ်အောင် (ခ)သားကြီးပါ သုံးဦးကိုဒုတိယအ ကြိမ်ရုံးထုတ်ရမန်ယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက”ဒီနေ့ဒုတိယအ ကြိမ်ရုံးထုတ်ရမန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ရဲလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်ဖို့မပြီးပြတ် သေးလို့ထပ်မံယူခဲ့တာပါ”ဟု ဇန်နဝါရီ ၁၈ရက်က ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးသို့အမှုမှ သန်းထွဋ်အောင်(ခ)သားကြီးပါသုံးဦးကို ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ-၃ဝ၂ နှင့် ပုဒ်မ-၁၁၄တို့ဖြင့် တရားစွဲတင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ဟာသသရုပ်ဆောင်အောင်ရဲ ထွေး(၂၄) နှစ်သည် နှစ်သစ်ကူးညက ၎င်း၏ချစ်သူနှင့်အတူ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်၊ ပေါ်ဆန်းမွှေးလမ်းရှိ The One Entertainment ဝင်းအတွင်း ကျင်းပသော ပါတီပွဲသို့ရောက်ရှိနေစဉ် ၎င်းအားဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ခဲ့သဖြင့် ဦးခေါင်းတွင် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့ကုသခဲ့ရာ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်၊ နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်က သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သန်းထွဋ်အောင်(ခ)သားကြီး (၂၆)နှစ်၊ ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်(ခ)အောင် လေး (၂၆)နှစ်နှင့် ကျော်ဇင်ဟန် (ခ)ကျော်ဇော် (၂၈)နှစ်တို့ သုံးဦးကို ၎င်းတို့၏မိဘများက ရဲစခန်းသို့ လာရောက်ပို့အပ်ခဲ့သည်။ နှစ်သစ်ကူးညက ၎င်းတို့သုံးဦး The One Entertainment ဝင်းတွင်ပြုလုပ်သည့် The Space ပါတီပွဲသို့ရောက်ရှိစဉ် VVIP စင်ပေါ် ၌ကခုန်နေသည့် အမျိုးသား(အောင်ရဲထွေး)မှာ ယခင်က ၎င်းတို့နှင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတစ်ဦးဖြစ်သဖြင့် ဒေါသဖြစ်ကာ စင်ပေါ်သို့တက်၍ ဝိုင်းဝန်းထိုး ကြိတ်ကန်ကြောက်ခဲ့ ကြောင်း သန်းထွဋ်အောင်(ခ)သား ကြီး၏ထွက်ဆိုချက်အရသိရသည် ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံးထံမှသိရသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်္ဃန်း ကျွန်းမြို့နယ်၊ သုဝဏ္ဏနယ်မြေရဲစခန်းမှ (ပ)၅/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ-၃ဝ၂/၁၁၄ဖြင့် သန်းထွဋ် အောင်(ခ)သားကြီးပါသုံးဦးကို အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့သည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းယာဉ်ဖြင့် မကွေးမြို့ ဈေးအချို့၌ FDA မှရှောင်တခင်စစ်ဆေး ၊ ဓာတုဆေးသုံးပစ္စည်းများ?
AA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကို တရားစွဲဆိုခြင်းမှာ နောက်တောင်ကျနေသေးဟု တပ်မတော်ပြောခွင့်ရ ဆို
စင်ကာပူတွင် အသက်(၁၉)နှစ် မပြည့်သူများ ဆေးလိပ်မသောက်ရ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း